Xildhibaan Mahad Salaad “ Taladu waa mar aad garan weydo iyo mar aad gaari weydo. Madaxweyne Farmaajow | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaan Mahad Salaad “ Taladu waa mar aad garan weydo iyo mar...
Xildhibaan Mahad Salaad “ Taladu waa mar aad garan weydo iyo mar aad gaari weydo. Madaxweyne Farmaajow
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadlay go’aankii wadajirka ahaa ee ka soo baxay ubbaland iyo Puntland oo ku baaqay in markale la’isugu yimaado shirweyne.
Previous articleAbiy Axmed oo markii ugu horreysay qoraal soo dhigay Twitter-ka kaddib wararka la xiriira xaaladdiisa caafimaad
Next articleMid ka mid ah Isbitaalada ugu casrisan Bariga Afrika oo Muqdisho laga hirgeliyey [SAWIRRO]
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in dalkiisa ay soo food saareen caqabado dhowr ah oo tijaabo ah oo burburin lahaa waddamo kale. Madaxweynaha oo...
Wasiir Dubbow beesha caalamka marka aad ku leedahay arrimaha soomaaliya ha...
Guddoomiyihii hore ee gobolka Wajeer oo xil ka qaadistiisii ku...